ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကို လှုပ်ခါသွားစေတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ပုံရိပ်…. - Zeekwat Hot News
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကို လှုပ်ခါသွားစေတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ပုံရိပ်….
October 9, 20190298
ပရိသတ်တွေရဲ့ စိင်္တဝင်စား အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်သာမက မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ်ပါ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ သိပ်မတွေ့ရပေမဲ့လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Photo : San Yati Moe Myint fb and Wunna Khwar Nee
သူမကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ပရိသတ်တွေအတွက် ဓါတ်ပုံ အသစ်တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ ငွေရောင် ပွဲတက်ဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရင်ခုန်သွားစေပြန်ပါပြီ။
Source : San Yati Moe Myint fb
ပရိသတတြှရေဲ့ စိငျြတဝငစြား အားပေးမှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ သူတစယြောကဖြှစတြဲ့ စံရတီမိုးမှငြ့ကတော့ သရုပဆြောငတြစယြောကအြဖှစသြာမက မောဒြယတြစယြောကအြဖှစပြါ အနုပညာလှုပရြှားမှုတှကေို ပှုလုပနြတေဲ့သူတစယြောကဖြှစပြါတယြ။ သူမကတော့ ရုပရြှငဇြာတကြားတှမှော သိပမြတှရေ့ပမေဲ့လညြး ဖစေ့ဘြုတပြေါမြှာ ပရိသတတြှနေဲ့ အဆကအြသှယမြပှတတြဲ့သူတစယြောကဖြှစပြါတယြ။
သူမကတော့ ဒီကနမှေ့ာလညြး ဖစဘြေုတပြေါမြှာ ပရိသတတြှအတှေကြ ဓါတပြုံ အသစတြှကေို တငပြေးလိုကပြါတယြ။ စံရတီမိုးမှငြ့ကတော့ ငှရေောငြ ပှဲတကဝြတစြုံလေးကို ဝတဆြငထြားပှီး ညို့အားပှငြးတဲ့ အလှနဲ့ ပရိသတတြှေ ရငခြုနသြှားစပှနေပြါပှီ။
စံရတီမိုးမြင့်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဓါတ်ပုံတွေကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာဆန်ဆန်ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ ဘေဘီမောင်ပုံရိပ်…..
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အတွင်းခံဇာအပါးလေးပဲ အုပ်ထားပြီး ပရိသတ်တွေကို ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်